Wararka - Waa maxay Dharka Ilaalinta Qorraxda? Waa maxay daaweynta UPF?
Haddii aad tahay bad-mareen firfircoon, biyo-doon ama biyo-biyood, waxaad u badan tahay in lagaa cawday inaad mar kasta oo aad jeedsato ku sunto qoraxda. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad dib u mariso shaashadda qorraxda labadii saacadoodba mar ama wixii la mid ah - gaar ahaan haddii aad shukumaanayso, dabbaalaneyso ama dhidid badan tahay. Inkasta oo tani aysan xallin doonin dhibaatooyinkaaga oo dhan - maxaa yeelay waxaa lagugula talinayaa in loo isticmaalo isku-dubbaridka qorrax-dhaca - ma kuu soo bandhigi karnaa dharka ilaalinta qorraxda?
Huh? Sidee uga duwan tahay dharka duugga ah ee caadiga ah, adigu waad weydiisaa?
Waa hagaag bilow, khabiir ku takhasusay maqaarka, Alok Vij, MD, ayaa sheegay in marka laga hadlayo dharka ay isticmaalaan ereyga "UPF", oo u taagan cunsur ilaalinta ultraviolet. Iyo shaashadda qorraxda, isticmaal ereyga "SPF," ama cunsuriyadda qorraxda ee aad looga yaqaanno. Inta badan shaatiyada cudbiga waxay ku siinayaan wax u dhigma ilaa UPF 5 ah marka aad xiraneyso, ayuu yiri.
Dharka ugu badan ee aan xidhnayno waa gogo 'dabacsan oo iftiinka la arki karo ka soo dhex baxo oo gaadha maqaarkayaga. Dharka ilaaliya UPF, tolidda waa ka duwan tahay oo marar badan ayaa laga sameeyaa dhar qaas ah si ay gacan uga geysato sameynta caqabad ku ah falaadhaha qorraxda. ”
Iftiinka UV-ga ayaa dhex gali kara daloolada yar-yar ee ku jira tolmada dharka caadiga ah ama xitaa wuxuu si toos ah ugu safri karaa shaati midab khafiif ah leh. Dharka UPF, baloogku aad buu uga weyn yahay, oo kaa siinaya difaac badan qorraxda. Dabcan, dharka leh UPF wuxuu kaliya ilaaliyaa meelaha jirkaaga ee ku daboolan dharka la daweeyay.
Inta badan dharka kahortaga qorraxda waxay umuuqdaan oo ay dareemayaan dareemo firfircoon ama jimicsi waxayna kujiraan shaarar kala duwan, lebbisyo iyo koofiyado. Sababtoo ah tirinta dunta sare, waxay badanaa dareemeysaa wax yar oo raaxo leh iyo funaanadaada caadiga ah.